Firy ny bisikileta ilain'ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikilety firy - ahoana no hamahanao
Bisikilety firy - ahoana no hamahanao
Firy ny bisikileta ilain'ny bisikileta?
Ho an'ny mpitaingina mpandala ny nentin-drazana, izany no mahatonga ny isa farafahakelinybisikiletadimy, ampitomboina roa mba hikarakarana olona roa ao anaty fiaraha-miasa, miaraka amin'ny +1 tsy mihoatrazavatra ilainadia nofongarina.21 2019.
Ny fanontaniana napetrakay tamin'ny mpomba azy androany maraina dia hoe firy ny bisikiletany? (Mozika Uptempo) Firy ny bisikiletanao ary anananao ao an-trano? - Firy ny ekipa ananako, tsy misy, fa firy aho? Manana an-trano aho, ka manana iray, hoy aho eo anelanelan'ny bisikileta enina sy valo eran'izao tontolo izao .- Firy ny bisikiletanao ao an-trano? (mihomehy) - Be loatra angamba manodidina ny 10 na 11 - Be loatra satria somary tezitra amiko ny vadiko. Tsy maintsy mamindra ny bisikileta amin'ny zoro iray mankany amin'ny iray hafa aho, saingy eny, somary mitazona bisikileta isaky ny vanim-potoana aho dia pro ary eny, eny, ho be dia be izao - oh, tsy maintsy ho izany bisikileta betsaka, fa amin'ny Mikasika bisikileta an-tendrombohitra na bisikileta vatokely na bisikileta pub, dia manana be dia be ve ianao? - Eny, manana bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta bisikileta, bisikileta amin'ny hazakaza-tsoavaly aho, eny, vonona ny hanao zavatra aho - Eny, toa toa ny fanosehana bisikileta hatrany an-jorony fotsiny izany.
Toa mila trano fanatobiana entana ianao. - (mihomehy) Eny, lakaly ambanin'ny tany lehibe kokoa, azo antoka izany. - Firy ny bisikiletanao amin'ny fitambarany? - Ry lehilahy.
N dia bisikileta fantatrao Ka tsy afaka hanana bisikileta ampy mihitsy ianao - (manainga) Manana Giant avy amin'ny HTC aho, manana Scott avy amin'ny HTC aho, manana bisikileta an-tendrombohitra Canyon aho tamin'ny 2011, Omega Pharma-Lotto, manana ridley roa aho, izaho manana Pally, vita tanana vita tanana iray manokana avy any Amerika. Manana Vespa aho. (Buzzer) Raha misy bisikileta ao.
Izaho koa manana moto (Buzzer) sy bisikileta matavy. Ny bisikiletako voalohany, ny GT, ny telozoro telozoro mahazatra raha tadidinao. Ie.
Ie - Modely inona izany? - Izy io dia, izany, a, oh, tianao holazaina. Heveriko fa GT01 io. Tena antitra izy, toy ny tamin'ny taona 2000.
No. 1999.- Eny, tsy manana bisikileta betsaka aho, fa manana bisikileta tsara any an-tendrombohitra aho.
Mitaingina azy tsara aho. Heveriko fa izany no iray amin'ireo antony nanatsarako be dia be teny amin'ny fidinana. Taorian'ny Tour de Suisse dia nanana razambe tena ratsy aho ary nanapa-kevitra ny hanatsara ny fahaizako ka nividy fahazarana ary nanomboka niasa tamin'ny fahaizako bisikileta an-tendrombohitra.
Ary manana Slate Cannondale koa aho, izay toy ny antsy Swiss Army amin'ny bisikileta. Azonao atao ny mitaingina azy na aiza na aiza.- Eny.- Ka ireto no bisikileta roa ananako.- Tsy dia be loatra.
Bisikileta telo na efatra fotsiny. - Zavatra iray ihany no ananako. Dia izay. - bisikileta iray fotsiny? - Eny, manana ny tenako novidiko tamin'ny volako aho - Ka amin'ny fitambarany miaraka amin'ireo bisikileta azonao amin'ny ekipa? - Telo.- Mihoatra ny 10 no eritreretiko. (mihomehy) - Tsy dia maro loatra, satria an'ny bisikileta ny ekipa. (mihomehy) Fa bisikileta enina na fito angamba no ao an-trano dieny izao, ao anatin'izany ny bisikileta an-tanàna, bisikileta an-tendrombohitra, sns. - anao manokana? Manana zavatra betsaka kokoa noho ny ahy aho.
Mieritreritra aho fa eo anelanelako sy ny vadiko, angamba manana bisikileta 10 na 12 any izahay, ary avy eo angamba sivy hafa any Girona - bisikileta rehetra amin'ny ekipa sa manana bisikileta pub ianao? - Manana karazana isan-karazany aho, toy ny bisikileta matavy, bisikileta E, bisikileta gravelte cross, eny. Bisikileta misy bisikileta samy hafa, bisikilety an-tendrombohitra, ka eny, izaho dia mpanangona kely - manana bisikileta pub ve ianao? - tsia, tsia, fa manana iray izay mety ho bisikileta pub aho. Manana ny bisikiletako taloha aho, ny bisikiletako voalohany, BT.- Oh, cool.- Ary mety handratra kely izany amin'izao fotoana izao, fa firy ny bisikiletanao? Ha! Tsy te hilaza aminao aho hoe firy ny bisikiletako ato an-trano, satria misy vitsivitsy, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny kodiarana aero record.
Mbola manana an'izany aho. Io sy ny bisikiletako an-tendrombohitra no hany bisikiletako. Ny ambiny dia bisikileta ekipa ary manana bisikileta fampiofanana TT sy bisikileta mahazatra aho.
Tsy maintsy nividy ny bisikiletanao aero ianao satria matetika ny mpitaingina bisikileta no mahazo ny bisikiletany amin'ny faran'ny taona, sa tsy izany? Azonao ve izany? - Tsia. Nahazo aho - Ankizilahy sambatra - Eny. Izy telo ireto.
Ny iray dia ao amin'ny tranombakoka Malvern Style. Ary ny iray miaraka amiko ato an-trano. - Iray amin'ireo nandiso fanantenana ahy indrindra io rehefa nitodika tany amin'ny Professional Finding aho fa tsy afaka nitandrina ny bisikiletako rehetra tamin'ny faran'ny taona, na dia nividy vitsivitsy aza.
tendrombohitra bisikileta midina any Hawaii
Mahaliana ny mahita hoe firy ny mpamily amin'izao fotoana izao no manavaka ny isan'ireo izay tazoniny sy ny isan'ny tsy anaovany. Ady bisikileta telo ihany no anarany ao amin'ny anarany i Adam Yates. Marina, raha nankafizinao ity lahatsoratra ity, mba omeo masony eto ambany azafady.
Ary raha te hahalala izay azon'ireto bisikileta atao ireto ianao raha tsy mpanao bisikileta matihanina dia tsindrio fotsiny eto.
Firy ny bisikileta nivarotra 2020?
nybisikiletaboom, amin'ny isa
IS-bisikiletadia nampiseho hery misimisy kokoa aza, miaraka amin'ny $ 490.8 tapitrisa amin'ny varotra amerikana ho an'ny fisondrotana 144 isan-jato isan-taona. Tsy any Etazonia ihany, mazava ho azy. Vinavinaina hividy vola 10 tapitrisa fanampiny ny eropeanabisikiletaisan-taona amin'ny2020, 47 isan-jato mahery noho ny isa isan-taona amin'ny taona 2019.
Rehefa nanidy ny fitateram-bahoaka sy ny gym ny coronavirus dia niverina tany amin'ny kilasika azo antoka ny Amerikanina. Ny varotra bisikileta tany Etazonia tamin'ny martsa dia nitombo 121 isan-jato tamin'ny volana aprily, ary nodiovina ireo fivarotana bisikileta manerana ny firenena. Tsy nisy fotoana nahitantsika ny fangatahana ary mbola mitohy ny fangatahana, saingy ny orinasan-bisikileta dia miatrika tsy fahampiana olana amin'ny bisikileta izay ny talantalana manontolo eto hatrany hatrany amin'ny ilan'ny trano fitehirizana dia matetika misy bisikileta ary ankehitriny tsy misy na inona na inona tao izay notsidihinay tamina magazay bisikileta roa, ny iray tao la iray tany arizona, hijerena ny fomba fiarahan'izy ireo amin'ity fitomboan'ny fangatahana mbola tsy nisy toa azy ity tamin'ny bisikileta mahazatra amin'ny stock dia afaka mandefa ilay bisikileta aminao izahay amin'io andro io ihany io mehdi mpanorina ny statebicycle amin'ny tempearizona dia mivarotra bisikileta 30 ka hatramin'ny 40 isan'andro isan'andro izy nefa izao dia efa nihoatra ny avo telo heny ny baiko isan'andro nataony dimam-polo amby zato metatra; bisikileta dia vita any Taiwan ary Sina ny volana janoary sy febrily ho an'ny taom-baovao dia nikatona nandritra ny efa-bolana farafahakeliny ireo mpamatsy bisikileta avy eo ary ny 19 dia nanidy ny orinasa nandritra ny iray volana iray hafa hatramin'ny volana febroary, izay nitranga talohan'ny nanombohan'ny fangatahana bisikileta any Etazonia amin'ny tapaky ny volana martsa.
Herinandro vitsivitsy monja taty aoriana dia namidy tanteraka ireo bisikileta, na dia heverina ho fivarotana tena ilaina aza ireo fivarotana bisikileta. Medi dia mbola nanana olana tamin'ny bisikileta vaovao amin'ny famokarana, mihabe ny fotoana ary izany no mbola ahitantsika ny tsy fahampiana bisikileta toy izany any los angeles. Adam mcdermott dia nanana tantara nitovy tamin'io ny bisikiletan'ny orinasa linus nopotehiny tamin'ny bisikiletany tonga ny fitoeran-javatra manaraka, efa namidy tanteraka adama ary ny mpiara-miasa aminy chadkushner dia nanomboka tamin'ny bisikileta linus tamin'ny taona 2007. ny mpanjifa dia afaka mividy bisikileta tanàna 50 avy amin'ny aingam-panahy frantsay amin'ny Internet eto amintsika Ny fivezivezena amin'ny tranonkala dia nitombo 150 teo ho eo toa ny sehatra rehetra amidinay vola miditra amin'ny bisikileta taiwan dia amidy eran'izao tontolo izao fa nijanona tao amin'ny trano fanatobiana lohasaha tao L.awe izahay, mba hitiavanay ny kely indrindra, raha mba nahazo vokatra bebe kokoa izahay tena miatrika an'izao isika izao, avy amin'ny fivarotany amoron-dranomasina any Venise, tsy dia lavitra loatra? Matetika ny ekipan'i Adam dia nivarotra bisikileta tamin'ny mpanjifa nandeha an-tongotra, izany hoe afaka nividy bisikileta ary nitondra azy ireo nody tamin'io andro io izy ireo, saingy noho ny areti-mandringana dia tsy safidy io hatramin'ny volana febroary, izay tsy dia mazava loatra amintsika, dia nisondrotra Linus tamin'ny fivarotana 1.200 singa iray isam-bolana ka hatramin'ny 4000 eo ho eo. Ankehitriny dia mila saika in-droa ny orinasa hamokarana bisikileta tokana hahitana ny fangatahana ilain'ny orinasa roa tonta hamoronana famoronana dia nandeha haingana tamin'ny fomba fanazaran-tena izahay ary nanomboka tamin'izany dia nametra ny isan'ny bisikileta ihany koa ny famokarana any ivelany. ny mpivarotra 300 dia afaka nivarotra, mba hitazomana ny fivarotana lehibe kokoa noho ny fanamafisana ny fomba rehetra sy ny fomba fanesorana ny fisian'ny magazay vitsivitsy hafa amin'ny alàlan'ny Linda Spikes satria nipoaka ny toerana miafina any New Jersey.
Vao mainka ratsy kokoa noho izany ny sary tany New Jersey sy New York, noho izany dia namerina ny lisitry ny lisitra rehetra ho any West Coast izahay satria toa hitohy hiasa hatrany ity trano fitobiana ity, ka dia manao ny fandefasana rehetra avy any West Coast izahay, lafo kokoa izany fa farafaharatsiny fantatray fa handeha ity trano fitobiana ity dia miasa amin'ny karazana tahiry vaovao ihany koa i Adama. Nandefa e-bisikileta vao nidina fotsiny izahay ka tsy misy akory izy ireo fa isika ihany dia mbola isika ihany ny fivarotana azy ireo ao amin'ny Presale ary ireo dia manodidina ny roa arivo ka hatramin'ny telo arivo dolara. Fiovana goavana tokoa io. Nanjary orinasam-pitantanana fitehirizana ary manandrana mizara ny lisitra, izay ahafahanay mitondra ny bisikileta amin'ny mpanjifa, ny fomba hahafahantsika mampifaly ny mpanjifa iray ary tsy hahavery mpanjifa iray hafa rehefa nanana bisikileta izahay ary mitovy ihany ny itovizanay amin'ny olona iray , Azoko an-tsaina fotsiny fa nitombo 10 heny ny varotra - linus maro kokoa no tsy manantena ny hamerina ny bisikiletany malaza amin'ny 2021.
Heveriko fa tena zava-dehibe ny tsy famerenana ity fangatahana adala ity izay vetivety ihany. Fantatro fa vetivety izany amin'ny fomba iray. Eritrereto raha misy orinasa manantena azy fotsiny, na mieritreritra fa handoa azy any aoriana ianao, ny torohevitra omeko an'ireo tompona orinasa kely hafa any, dia miezaha ho mailaka sy malemy paika araka izay azo atao mba hahafahany mampifanaraka sy miaina.
Ho an'ireo orinasa roa ireo, ny fiakarana lehibe indrindra dia nitranga tany amin'ireo tanàna izay nanakalozan'ny mponina bisikileta tamin'ny lamasinina feno olona. Portland New York Brooklyn Chicago dia tsena lehibe izay mahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny alàlan'ny bisikileta raha ampitahaina amin'ny lalamby na bus, ary mety tsy hihena ny fangatahana kodiarana roa. Mino izahay fa hitohy hatramin'ny 2021 ny fitakiana satria maro ny mpitaingina mizaha ny tanànany amin'ny bisikileta amin'ny bisikileta izay mazava ho azy fa tsara ho an'ny tontolo iainana, tianay ny mahita izany ary iza no mahalala? na ilay mpandeha an-dalambe armstrong na tour de france nandresy tamin'ny bisikileta aza nandritra ity areti-mandringana ity ary mandritra ny taona vitsivitsy dia ho hitantsika mivoaka avy ao aminy ilay bisikileta amerikana lehibe manaraka.
Firy ny bisikileta amin'izao tontolo izao 2020?
Raha ny angom-baovao azo avy amin'ny Agency Press avy amin'nyBisikileta-Guider.com data, hita fa manodidina ny 1 miliarabisikiletaao amin'nyizao tontolo izao.27 2020.
Firy ny bisikileta ilainao N 1?
Raha ny isa farafahakeliny an'nybisikileta tokony hataony azy dia telo, ny isa marina dian+1, aizanno isan'nybisikiletatompony ankehitriny. Ity fampitahana ity dia azo soratana indray ho s1, aiza ny isan'nybisikiletatompony izayvemiteraka fisarahana amin'ny vadinao.
Firy ny bisikileta vita ao anatin'ny iray andro?
364,000bisikileta no vokarinaisan'andro.
15000 isan'ora izany, na 253 isa-minitra, na 4bisikiletasegondra.
Firy ny bisikileta angalarina isan-taona?
Halatra bisikileta maherin'ny 25000 no voalazaangalarina isan-taonaamin'nyCalifornia,nystatistika fa ny tenany ihany dia mahavariana rehefa misy koa mihevitra ny isan'ny halatra bisikileta izay tsy mitatitra.Bisikileta nangalarin'i Californiamandrafitra ny 15% mahery any Etazonia.bisikiletaizany no voalazaangalarina isan-taona.
Firenena iza no manao bisikileta tsara indrindra?
Danemark. Matetika i Danemark no mandray ny satroboninahitra satria izy nofirenena tsara indrindraeto amin'izao tontolo izao ho an'ny bisikileta, satria mbola mitohy ny dingana lehibe apetrany eo amin'ny familiana ny kodiarana. Ilay kelyfirenenamirehareha amin'ny 12000km maherytsingerin'nyzotra, miaraka amin'ireo tetezana bisikileta natokana any an-tanàna toa an'i Copenhagen renivohitra.31 2018.
Firenena iza no manana bisikileta betsaka indrindra?
Netherlandsmihazonany firaketana ho firenena miaraka amin'nybisikileta indrindraper capita. Be bisikileta koa any Norvezy, Suède, Alemana ary Danemarka.
Inona ny fitsipika N 1 amin'ny bisikileta?
Raha efa teo ianaobisikiletalava, mety ho fantatrao ilayn+1fitsipika. Toy izao no ilazalazan'i Velominati azy: Ny isan'ny marina an'nybisikiletany manana dian+1. Raha ny isa farafahakeliny an'nybisikileta iraytokony hanana dia telo, ny isa marina dian+1, aizanno isan'nybisikiletatompony ankehitriny.
Hatramin'ny 2014, dia misy bisikileta maherin'ny arivo tapitrisa mahery eto amin'izao tontolo izao. Manakaiky ny antsasak'io vola io i Shina, misy 450 tapitrisa. Tamin'ny 1995, Etazonia dia nanana 100 tapitrisa.
Inona no isan'ny bisikileta tsara indrindra hananana?
Misafidy izay bisikileta alehany izy ireo mifototra amin'ny karazana hazakazaka na ny fiaran-dalamby izay hataony. Ny ankamaroan'ny Roadies dia mino fa ny isa tsara indrindra amin'ny bisikileta hananana dia iray hafa noho izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy dia hafahafa loatra izany, marina.
Firy ny bisikileta amidy any Etazonia isan'ora?
Bisikileta 364000 no vokarina isan'andro. 15000 isan'ora izany, na 253 isa-minitra, na bisikileta 4 isan-tsegondra. Bisikileta 47 670 no amidy isan'andro. Eny, isaky ny roa segondra dia misy olona mividy bisikileta.